ခေါက်ဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ ရှမ်းမုန့်တီချက်စားမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခေါက်ဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ ရှမ်းမုန့်တီချက်စားမယ်
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 13, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 33 comments
ရှမ်းရိုးရာအစားအစာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အစားအစာတခုဖြစ်တဲ့ ခေါက်ဆင့်ချက်နည်းလေးပါ
ခေါက်ဆင့်ကတော့ ကျိုင်းတုံနယ်ဘက်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မနက်စာအဖြစ်စားတဲ့အစားအစာလေးပါ
ခေါက်ဆင့်ဆိုတာကတော့ ခေါက်ဆိုတာက ထမင်း …ဆင့်ဆိုတာကတော့ အမျှင် ထမင်းမျင်လို့ပြောရင် ရီချင်စရာကြီးပေါ့
ဆန်နဲ့လုပ်တဲ့ အမျင်ဆိုမှတော့ မုန့်တီပေါ့
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် ရှမ်းမုန့်တီပါ …
ရင်ငြိမ်းအရမ်းကြိုက်တဲ့ အစားအစာ တခုဖြစ်သလို
အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း မဲ့မဲ့ရဲ့ ခေါက်ဆင့်ကို မစားမနေနိုင်တဲ့ အစားအစာတခုပါ…
ခေါက်ဆင့်ကို နည်း၂ မျိုးနဲ့ ချက်စားတတ်ကြပါတယ်။
ပထမနည်းက ခေါက်ဆိန့် ဂျိန်း(မ်)(မုန့် တီဟင်းအချို)လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ကျိုင်းတုံမုန့် တီပေါ့။
အထဲမှာ ထည့်စားတဲ့ အရွက်တွေကတော့
(12) နှမ်းထောင်း ဆိုရင်ဖြင့် အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ခေါက်ဆင့်လေး ရပြီပေါ့….
နောက်တနည်းကတော့ ခေါက်ဆိန့် ကျန် လို့ ခေါ်တဲ့(မုန့် တီအပေါ့) ပေါ့
သူကျတော့ ဟင်းအနှစ်မလိုဘဲ ဝက်အူတွေကိုနေလှမ်းပြီး ကျွတ်နေအောင်ကြော်ထားတာလေးကို အပေါ်ကနေဖြူးစားတာပါ။
အဓိကတော့ဝါထိန်နေတဲ့ ဆီချက် နမ့်ဆန်းတိုဖူး ဝက်ဆီနဲ့ ချက်တာ၊ ခဲပြစ်ပြစ်ကြီးပေါ့
ဟင်းရည်ကလည်း ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းနဲ့ ပြုတ်ထားတဲ့ ဝက်ရိုးပြုတ်ရည် အထဲကိုဝက်သွေးခဲလည်းထည့်တတ်ကြပါတယ်။
ခေါက်ဆင့်ချက်ဖို့ ပဲပုတ်ချပ်လေးများလိုပါတယ်(မုန့် တီ ၁ ပိသာလျှင် ၄ ချပ်နှုန်းထည့်ရပါတယ်) နူးအိသွားတဲ့ပဲပုတ်ချပ်များကို ကြိတ်ပြီးရေဖျော်ထားပါတယ်
လက်ပံပွင့်ခြောက်များကိုလည်း နာရီဝက်ခန့် ရေစိမ်ထားပြီး နူးအောင်ပြုတ်ထားပါတယ်
ဟင်းအနှစ်ချက်ဖို့ ခရမ်းချဉ်သီးများနဲ့ ပဲပုတ်ချပ်များကို ဆနွင်းမှုန့် အနည်းထည့်ပြီး နူးအောင်ပြုတ်ထားပါတယ်
ကြက်သွန်နီ/ဖြူတို့ ကို ကြိတ်ထားပါတယ် ၀က်နံရိုး ၂၅ကျပ်သားကိုရေဆေးသန့် စင်ပြီး ပြုတ်ထားပါတယ်။
၀က်သားအဆီနဲနဲ အသားများများ ၂၅ကျပ်သားကို ရေဆေးသန့် စင်ပြီး လက်မ၀က်အတုံးလေးများ လှီးထားပါတယ်။
ကြက်သွေးခဲ (ပဲသွေးပေါ့) ၃ တုံးကို အတုံးလေးများလှီးထားပါတယ်
ပြီးရင် ကြက်သွန်နီ/ဖြူ တို့ ကိုဆီသတ်ပြီး အနံ့ မွှေးလာလျှင် ၀က်သားအတုံးလေးများကိုထည့်ပါ ၊ ဆားအနည်းငယ် ၊ ဆနွင်းမှုန့် အနည်းငယ် ထည့်ပါ။ အသားကျက်ရင် ခရမ်းချဉ်သီး ထည့်ပါ။ ဆီပြန်လာရင် ပဲပုတ်အရည်ထည့်ပြီး ဆီထပ်ပြန်လာလျှင် ကြက်သွေးခဲများထည့်ပါ။ တခဏလောက်မွှေပြီးလျှင် အရသာအပေါ့အငံမြည်းပြီး ဟင်းအနှစ်ကို ၀က်ရိုးပြုတ်ရည်အိုးမှာ လောင်းထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် နာရီဝက်ခန့် တည်ထားပါ။
သုံးဆောင်ခါနီး ဟင်းရည်ပူပူကို ဒီလိုကျိုင်းတုံမုန့် တီပေါ်မှာ လက်ပံပွင့်နဲ့ရွှေပဲရွက်ထည့်ပြီး လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ဟင်းရည်များ မုန့် တီထဲစိမ့်ဝင်ပြီး အရသာပိုရှိစေရန်အတွက် ဟင်းရည်ပူပူကို မုန့် တီပန်းကန်လုံးထဲလောင်းထည့်လိုက် အိုးထဲပြန်သွန်လိုက်နဲ့၂ ကြိမ်ခန့် လုပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အရသာ အရမ်းရှိလှတဲ့ ရှမ်းမုန့်တီရပြီပေါ့
သူကို ၀က်ခေါက်ကြော်လေးနဲ့ တွဲဖက်ပြီးစားသုံးနိုင်ပါတယ် ……
အရသာရှိလှတဲ့ ရှမ်းမုန့်တီလပ်ြစားတဲ့နေ့ကျရင် ဖိတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်
အောက်မှာပြောထားတယ်လေ …ချက်စားရင် ဖိတ်ဖို့မေ့နဲ့လို့ … အာဟိ
တိန်… ခေါက်ဆင့်တော့ ကြိုက်ပါ့…
ပျင်းရင် ချက်စားဖြစ်တယ်၊ ဒီမှာတော့ ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ မုန့်တီဖတ်ရတယ်…
ခက်တာက ဝက်သွေးခဲ၊ လက်ပံပွင့်ခြောက်နဲ့ ပဲလိပ်ပြာရွက် မရလို့…
ရွှေဖရုံညွန့်ထည့်စားတာ အဆင်မပြေဘူး… အရသာ တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်…
ရွာပြန်ရင် လက်ပံပွင့်ခြောက် သယ်ဦးမှ…
မိဗိုက်မို့ အားနာလို့ ချက်ကျွေးပါ မပြောတော့ဘူး… ဟီး ဟီး
ပဲလိပ်ပြာရွက် မရင်နေပါ ရွှေပဲရွက်ရရင် ရပြီကို …
နှင်းကလေးကို ပြောပြီး ချက်ကျွေးခိုင်းပေါ့
နှင်းကလေးစားချင်ရင် ချက်ကျွေးဖို့ပါ… ဟီ ဟိ
မင်းလက်ရာလေးက ကောင်းလို့ စားချင်လိုက်တာ (ကိုယ်တွေ့)
ဂလိုပဲ မြောက်မြောက်ပြီး ခိုင်းတွားတာပဲ
တစ်နေ့ နေ့ကျ …
သည်းလေး ချက်ကျွေးတာ စားမယ် …
အသဲနဲ့ ချက်စားလဲ ကောင်းတယ် ဟိဟိ
မစားဖူးဘူး.. စားချင်တယ်.. ကျိုင်းတုံကဆိုရင် ၀က်ခေါက်ကြော်၊ ကျိုင်းတုံဝက်အူချောင်းနဲ့ အမဲလုံးခေါက်ဆွဲဆိုသိပ်ကြိုက်..
Crystalline လေးရေ ….
အမဲလုံးခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းလေးလည်း တင်ဖို့လုပ်ထားပြီးသား
ကျိုင်းတုံကတော့ အဲအစားအစာတွေမှာ နာမည်ကြီးပေါ့
အမဲသားလုံးခေါက်ဆွဲကို ကြိုက်ရင်မုန့်တီလဲ ကြိုက်မှာသေချာတယ် …
ဦးကြောင်ကြီး အမဲသား အစားဗူး… ခရစ်စတယ်လေး စားရင်တော့ သေခန်းပြတ်ပဲ… ဝက်ခေါက်နဲ့ ဝက်အူချောင်းကတော့ လာထား.. ဂျီးတော်နွေးသီးရေ သူ့ကိုရှမ်းစာ ချက်ပြုတ်နည်း သင်ပေးထားပါဗျာ….။ အိမ်ဦးနတ် ဦးကြောင်ကြီးကို သူပြုစုရတော့မှာ… ချက်ထားကွ… ရှမ်းမုန့်တီနဲ့ အခေါက်ကြော် စားပြီးရင် ခရစ်စတယ်လေးကို အချိုတည်းမယ်…..
တောင်ကြီးမှာ ဘဲ စားခဲ့ရဘူးတဲ့ ရှမ်းမုန့်တီ ပါ။
ရန်ကုန် မှာ မစားရတော့ပါဘူး။
အဓိက ရွှေပဲရွက် လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် ကိုလွမ်းပါတယ်။
ဒါထက် Due Date က ဘယ်တော့ လဲ။
ရွှေတိုက် ရဲ့ အုပ်အုပ် တစ်ယောက် လဲ အတော် နီးပြီ ထင်ရဲ့။
အရီးရေ … အုပ်အုပ်က သမီးလေး မွေးပြီးသွားပါပြီ
အနော်က ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ပါ … (သတိတရလေး မေးလို့ ကျေးဇူးပါ)
ရွှေပဲရွက်က တောင်ကြီးမှာသာ လက်လက်ဆက်ဆက်ရတာ အရီးရ
ရွှေပဲရွက်ရယ် လပ်ပံပွင့်ခြောက်ကြောင့် အရသာပိုထူးသွားတာ
ဗိုက်ကြီးသည်မို့လားမသိ … ခုတလော ရှမ်းစာတွေသာ စားချင်ရင်း စားချင်နေလို့
လုပ်လုပ်စားဖြစ်တယ် အရီး …
ရွှေပဲရွက်ကလှည်းတန်းမှာရတယ်။ ဈေးတော့ကြီးတယ်။ စားချင်တော့လဲဝယ်စားရတော့တာပဲ။
ရွှေတိုက် ရဲ့ အုပ်အုပ် ကဖြင့်မွေးပီးလို့ ခလေးတောင်ကျောင်းထားတော့မယ်..
သများ က ဘိုလို သိနိုင်ပါ့မလဲ။
မောင်တိုက် ဆီ စာပို့ လိုက်ပါဦးမယ်။
အင်း..နွေးတီးရေ..ကျောက်စ် တို့ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေး..ဘာတဲ့ တရှီးရှီးအော်နေတဲ့ဟိုတစ်ယာက်လေ
သူတို့တော့ သွားမစလေနဲ့ လေနဲ့တင် သေသွားနိုင်တယ်
ရှီးကိုယ်တိုင်ကိုက အားကျချင်စရာ ပြန်ပြန်စနေတာ ချစ်စရာလေး
ကော်မန်းဖတ်ရတောတောင် တော်တော် ပျော်စရာကောင်းနေဘီ
ရုပ်နဲ့ စိတ်နဲ့ လိုက်ပါပေတယ်
ဒါ့ကြောင့်လည်း တရှီးရှီးနဲ့ ပြောတဲ့သူက ပြောအားရှိတာပေါ့
ဟောဒီရွာထဲက ကြက်သရေအရှိဆုံး ကောမန့်ပိုင်ရှင် ပါကလားကွယ်…
မြောက်အမေရိက တိုက်က မျက်စိအမွဲဆုံး မြေဖုတ်ကဝေ ဂျီးနဲ့ များကွာထှာ…
အနော်က ဘွင်ဘွင်ဘဲ ပြောတတ်လို့ဘာ ….
အောင်မယ်လေး အစဆွဲထုပ်ကြဗျန်ဘီ။ ဘယ်သွားသွားလွတ်ကိုမလွတ်ပါဘူးဆို။ ဒီမုန့်ပိုစ့် မှာလဲလာတွေ့ဗျန်ဘီ။ ခက်စ်ဘီ ခက်စ်ဘီ။
တွားပြီ တွားပြီ … မြှောက်ပေးတာ လက်လွန်သွားလို့…
မောင်ဂီ တစ်ယောက် ကနေရင်း “_ တက်” သွားပြီ…ဟီ ဟိ
ရှမ်းစာတွေထဲ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ ငါးထမင်း ဘဲစားဖူးတာ…
fb ထဲက ပုံလေးကြည့်ရတာ စားချင်စရာလေးရယ်…
ရှမ်းခေါက်ဆွဲလဲ ပဲပုပ်မထဲ့တာ ပိုကြိုက်တယ်…
ချွှင် ချွှန် ချင် ….
အ.ထ.က(4)ကျောင်းဘေးက ရှမ်းမုန့်တီ လွတ်ကောင်း
နောက် ကျောင်းအောက်ဘက်က တိုင်းဆိုင်တဲ့ တိုဖူးနွေးဆိုင်
သူ့ရှေ့တဲ့တဲ့က မောခမ်းနွံ က ရှမ်းစာတွေ
မစားဖူးဘူး ….စားကြည့်ချင်လိုက်တာ :-)
တောင်ကြီးဆိုရင်တော့ ဆိုင်တွေ ပေါတယ် ….
အရင်တုန်းကတော့ မြေနီကုန်းနားမှာ ၇သေးတယ်
ခုတော့ ဆိုင်မရှိတော့ဘူး ပြောင်းသွားဘီ
မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်းက ရွှေပန်ဆိုင်း ဆိုင် မှာ ရနိုင်ပါတယ်
အဲ့ဆိုင်ရောက် ရင် နာမည်ကြီးတဲ့ ရှမ်းအစားအစာတွေ အများရီး ရတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့
ခေါက်ဆင့်ကို ဆာ့ခုမ် နဲ့ တို့စားရတာလဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်
စီအန်အန်ရဲ့.. မြန်မာ့စားစရာစရင်း၁၀မျိုးထဲ.. ရှမ်းနွယ်အစာက.. ၃မျိုးပါနေတာတွေ့ရတယ်..။
ကျုပ်အတွေ့အကြုံအရလည်း.. မြန်မာ့အစားအစာထဲ.. ရှမ်းစာကသာ.. ကမ္ဘာတန်းတိုးပေါက်ဖို့ရှိတယ်လို့.. မြင်တယ်..။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး.. မြန်မာ့ပထမသမ္မတဟာ.. ရှမ်းလူမျိုး..
အခုလည်း.. ဒုသမ္မတက.. ရှမ်း..။
အခုလောလောဆယ်မှာကို.. သီရိလင်္ကာမှာ.. ဘာသာရေးနဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့(တကယ်ကျောင်းတက်ပြီး) ယူတွေထဲ.. ရဟန်း၆ပါးရှိတာမှာ.. ၃ပါးက… ရှမ်းတဲ့…
တပါးကရခိုင်.. တပါးကဗမာ.. တပါးက.. မွန်..
သခင်မျိုးဟေ့.. ရှမ်း.. အဲ.. အဲ.. ဘားမန်င်း..။
တရုတ်နဲ့ရှမ်းနဲ့ က အစားအစာ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်
တလုတ်လောက်တော့ အစားမသောင်းကျန်းပေမဲ့ ရှမ်းစာလေးတွေက စားကောင်းတယ်